Ozi nke Nwanyị Nwanyị anyị nke Zaro dere 26.03.2016 | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ozi nke Nwanyị nwanyị anyị nke Zaro sitere na 26.03.2016
di Paolo Tescione - Machị 29, 2016
Ahụrụ m Mama ka ọ na-afụ ụfụ, ọ yi uwe niile oji, n'isi ya bụ akwa ojii nke gbadara n'ụkwụ ya wee kechie ya; gburugburu isi ya o nwere okpueze nke kpakpando iri na abụọ, ihu ya dị uju ma na-atọ ụtọ n'otu oge ahụ, agba ya gbara anya mmiri ya na anya ya na-enwu gbaa. N’aka aka ya nke ejiri aka ya kpee ekpere, Nne nke elu-igwe jidere okpueze nke rosary nsọ; ukwu-ya abua b barea ọtọ, dabere n’elu ala nke tọb andọrọ n'efu na ala di lari. Otuto dịrị Jesus Christ
“Childrenmụ m, kpeenụ ekpere. Jizọs m nwụrụ n’elu obe n’etiti ihe mgbu dị egwu maka naanị gị, iji tọhapụ gị n’agbụ nke mmehie ma nye gị ndụ ebighi ebi ma gị, ụmụ m, gịnị ka ị na-emere ya?
Mama m gwara m: "Bịanụ nwa nkịtị na anyị na-akpọ isiala nye." Achọtara m onwe m n’ukwu ala obe ya na Jizọs n’ahụhụ na-atasị ọbara, enwere m mmetụta nhụjuanya Ya na ịhụnanya Ya n’ebe anyị nọ nke ukwuu na nnukwu; Ahụhụ mama m na-ekpe na nnukwute okwukwe o nwere na Chineke, na ịnakwere uche Chineke n’ekwughị ihe ọ bụla, n’enweghị obi abụọ ma ọ bụ ụjọ. Mama m maara na ihe a niile, ihe mgbu ahụ niile, bụ maka nzọpụta anyị ma jiri obi jupụtara n'ịhụnanya gbaghara onye ọ bụla. Mgbe ahụ, enwere m obi nke Mama na Jesus na-akụ n'otu. Site na iku ume ikpeazụ nke Jizọs, obi ya kwụsịrị ịkụ nwa oge nwa oge kwa, mama m kwụsịkwara iti ya ihe, mgbe ahụ n'ihi ịhụnanya anyị hụrụ ya, ọ malitere ịkụ ọzọ.
“Mymụ m, a hụrụ m unu n'anya nke ukwuu. Mụaka, gbuo ikpere n'ala na obe na-akpọ isiala nye nwa m nwụrụ anwụ n'ihi unu, hapụnụ onwe unu ka idei mmiri rie ma sachapụ ya site n'ọbara Ya ka O wee mee ka unu dị ọcha, mee ka idei mmiri jupụta unu, kpụzie unu, gwọọ unu.
Mymụ m, meghee obi unu, ka ịhụnanya Ya dị ukwuu kpuchie onwe unu, ịhụnanya nke ukwuu nke na ọ kwụsịbeghị inye unu ndụ Ya.
Ugbu a, a na m enye gị ngọzi m dị nsọ. Daalụ maka ịbịakwute m. "